deva bikas bank limited(deva bikas bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
देवः विकास बैंक कुमारीमा बिलय हुन तयार, बोनस प्रस्ताव पनि पारित
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंक लिमीटेडको तेहौं वार्षिक साधारण सभा जेष्ठ १९ गते सोमबार संचालक समितिका अध्यक्ष उपरथी बज्र गुरुङ्गको अध्यक्षतामा काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । कोभिड १९ को महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी बैंकको साधारण सभामा सम्पूर्ण आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बैकका शेयरधनीहरु अनलाइन मार्फत भरच्यूअली सभामा सहभागी भएका थिए ।...
देवः विकास बैंकको वार्षिक साधारणसभा जेठ १९ गते, कुमारी बैंकमा विलय हुने प्रस्ताव पारित हुने
काठमाण्डौ । कुमारी बैंकमा विलय हुन लागेको देवः विकास बैंकले आफ्नो तेह्रौँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ। बैंक सञ्चालन समितिको हिजो बसेको बैठकले आउँदो जेठ १९ गते सोमबार काठमाण्डौको लालदरबारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको हो। सभामा मुख्य अजेन्डाका रुपमा राखिने कुमारी बैंकमा गाभिने प्रस्ताव...
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीका लागि लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। बैंकले हालको चुक्तापुँजी ३ अर्ब १७ करोड ७१ लाख ९२७.४६ रुपैयाँको ८.५५ प्रतिशतले हुन आउने २७ लाख १६ हजार ४२१.२९ कित्ता बोनस सेयर वितरण गर्ने...
जोरपाटीस्थित देवः विकास बैंकको शाखा उद्घाटन
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंक लिमिटेडको काठमाण्डौको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ६ जोरपाटीमा सञ्चालित जोरपाटी शाखा कार्यालयको आज बुधबार औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ। बैंक संचालक समितिका सदस्य भरतबहादुर हमालबाट शाखाको औपचारिक उद्घाटन भएको हो। कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै हमालले गुणस्तरिय सेवा विस्तारमा जोड दिए। उनले यस...
कुमारीले प्राप्ति गर्न लागेको देवः विकास बैंकको सेयर कारोबार रोक्का
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कुमारी बैंकले प्राप्ति गर्न लागेको देवः विकास बैंकको सेयर कारोबार बिहीबारदेखि रोक्का गरेको छ । कुमारी र देवः विकास बैंकबीच प्राप्ति प्रक्रियाका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी आजै प्राप्त भएकोले देवः विकास बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गरिएको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्सेले बैंक तथा वित्तीय...
कुमारी बैंकले देवः विकास बैंकलाई अक्वायर गर्ने
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंकलाई कुमारी बैंक लिमीटेडले प्राप्ति गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय दुवै बैंकका संचालकहरुबीच चलेको लामो छलफलपछि यस्तो सहमति भएको हो । कुमारी बैंकस्थित उच्च स्रोतका अनुसार देव विकाास बैंकलाई १००ः८५ हाराहारीको सेयर स्वाप रेसियोमा अक्वायर गर्ने सहमति बनेको हो । डिडिए गर्ने क्रममा यो स्वापमा केही तलमाथि...
देव बैंकको बहादुरगञ्ज शाखा उद्घाटन
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंक लिमीटेडले कृष्णनगर नगरपालिका वडानम्बर ८ मा संचालित बहादुरगञ्ज शाखाको औपचारिक उद्घाटन गरेको छ । एक समारोहकाबीच सोमबार कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख रजतप्रताप शाहबाट सो शाखा कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन भएको हो । शाहले कृष्णनगर क्षेत्रको आर्थिक विकासमा बैकसँग हातेमालो गरी स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न...
देवः विकास बैंकद्वारा २ सय विद्यार्थीलाई स्कुल ब्याग वितरण
काठमाण्डौ । देवः विकास बैक लिमिटेले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तरर्गत बुधबार खजुरा शाखा कार्यालयको आयोजनामा बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको धियास्थित श्री पशुपति माध्यामिक विद्यालय तथा चमकदरपुरस्थित मदरसा नुरगाजि रजाउलुलुममा अध्ययनरत विभिन्न समुदायका २०० जना विद्यार्थीलाई सुरक्षितसाथ शैक्षिक सामाग्री राख्नका लागि...
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंक लि. १३औं बर्ष पूरा गरी १४औं बर्षमा प्रवेश गरेको शुभ अवसरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम बैंकको केन्द्रिय कार्यालय, लालदरबारमा सम्पन्न भयो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोग एवं ब्लड डोनर्स एशोसियशन नेपाल,काठमाडौं जिल्लाको सहकार्यमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा ७० जना भन्दा बढी रक्तदाताहरुको सहभागिता जनाउनु...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्र्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले मर्जर र एक्वीजिसन गर्दा कल्चर मिल्न गाह्रो भन्दै अनावश्यक बखेडा नझिक्न बैंकरहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । देवः विकास बैंकले वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरी एकीकृत वित्तीय कारोबार सुरुवात गर्न आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले यस्तो चेतावनी...
मर्जरपछि दुई बैंक र एक लघुवित्तको नामबाट आजदेखि एकीकृत कारोबार
काठमाण्डौ । मर्जर र प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरेपछि दुई बैंक र एक लघुवित्तको नामबाट सोमबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु हुँदैछ। जेबिल्स फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले सोमबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्दैछ । त्यस्तै वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्त गरेर देवः विकास बैंकले आजैबाट एकीकृत...
देवः र वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको एकीकृत कारोबार भोलिबाट
काठमाण्डौ । वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेको देवः विकास बैंकले सोमबारबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएको छ । देवः विकास बैंकलाई वेस्टर्न डेभलपमेण्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार २५ गते अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकबाट वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति हुनेरगर्ने अन्तिम दिनसम्म कायम...